बीबीसी, यौनकाण्ड र विश्वासको संकट – Media Kurakani
November 30th, 2012 Media Kurakani Archives
जीवित हुँदासम्म उनी बेलायतमा सबैभन्दा रुचाइएका टेलिभिजनकर्मी थिए । ‘जिम्मी विल फिक्स इट’ नामक कार्यक्रमका सञ्चालक उनी मुख्यगरी वालवालिकामाझ निकै चर्चित थिए । मिलनसार स्वभावका उनलाई उनका सामाजिक कामका लागि पनि सम्मानपूर्वक सम्झना गरिन्थ्यो ।
के सेभिललाई जोगाउन उनीबारे बनाइएको सामाग्री प्रसारण हुनबाट रोकिएको थियो ? उनलाई जोगाउन बीबीसीले पत्रकारिताका स्थापित मापदण्डलाई दाउमा राखेकै हो त ? सेभिलका बारेको समाचारको हत्या कसले गर्‍यो ?
बीबीसीका कोको यस काण्डमा संलग्न थिए ? जस्ता गम्भीर प्रश्नहरु खडा भए ।
सन् १९२२ मा स्थापना भएको बीबीसी १९२६ को अन्त्यमा कम्पनीबाट गैर नाफामुखी कर्पोरेसनमा रुपान्तरित भएको थियो । जोन रेथ बीबीसीको सुरुका महानिर्देशक थिए ।
बीबीसीमा राजनीतिक प्रभाव जमाउन त्यतिबेलाका राजनीतिज्ञले गरेको प्रयत्नसँग लड्दै उनले नागरिकलाई ‘शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जन दिने’ मिडियाका रुपमा बीबीसीलाई स्थापित गरेका थिए ।
विश्वका धेरैजसो प्रसारकले शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको रेथ फर्मुला अपनाएका छन् ।
दर्शकले सरकारलाई तिर्ने लाइसेन्स शुल्कबाट बीबीसी सञ्चालन हुन्छ । सुरुमा सरकारले संकलन गरेको रकम पछि बीबीसीको नाममा रकम ट्रान्सफर हुन्छ । उक्त रकम बीबीसीको टेलिभिजन, रेडियो र अनलाइन सेवाका लागि खर्च हुन्छ ।
के के चलाउँछ बीबीसी ?
बीबीसी दर्शक संख्याको आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रसारण संस्था हो । बीबीसीले १० वटा राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानल, १० वटा राष्ट्रिय रेडियो स्टेशन सहित बीबीसी रेड बटन इन्टरएक्टिभ टेलिभिजन सञ्चालन गरेको छ । यस्तै उसँग स्कटल्यान्ड, वेल्स, दक्षिणी आयरल्याण्डमा छुट्टाछुट्टै रेडियो र टेलिभिजन सेवा छन् भने ४० भन्दा बढी स्थानीय रेडियो स्टेसन छन् ।
यसले बीबीसी अनलाइन र बीबीसी विश्व सेवा पनि सञ्चालन गर्छ ।
गुमेको विश्वास फर्काउँदै बीबीसी
बीबीसी ट्रस्टका अध्यक्ष क्रिश प्याटेन गम्भीर गल्ती र यदाकदा हुने असफलताका बाबजुद बीबीसीले जनताको विश्वास कायम गर्न सक्नेमा विश्वस्त छन् ।
धुमिलिएको विश्वास फर्काउन प्रयासत बीबीसीले पूर्व समाचार प्रमुख ६१ वर्षिय टोनी हललाई नयाँ महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । र, बीबीसीको नेतृत्वले संस्थाको पत्रकारिता र सम्पादकीय निर्णय पद्दतिमा गम्भीर गल्ती भएको स्वीकार गरेको छ ।
आन्तरिक अनुसन्धानले समेत पत्रकारिताको अभ्यासमा अब्बल मानिएको बीबीसीजस्तो संस्थामा कार्यक्रमको अन्तिम सम्पादकीय कसले गर्ने र जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा द्विविधा रहेको देखाएको छ ।
हरेक वर्षजस्तो हुने बजेट कटौति, अन्य व्यवसायिक सञ्चार संस्थासँगको तीब्र प्रतिस्पर्धासँग जुधिरहेको बीबीसीमा सम्पादकीय जिम्मेवारीबोध र यसभित्र रहेका खराब आचरणका व्यक्तिका कारण निम्तिएको विश्वासको संकट चिरेर अघि बढ्नु बीबीसीको मुख्य चुनौती हो ।
Now hasasequel in the form of Adventure Ponies 2: Wait! »
« ‘आफ्नै छटपटीले नागरिकबाट राजीनामा’